Akụkọ Jennifer Golden na Martech Zone |
Edemede site na Jennifer Golden
Jennifer Golden bụ onye isi ahịa nke ụlọ ọrụ nwere ọrụ zuru ụwa ọnụ maka atụmatụ ahịa na igbu ọchụ na MRP. Jennifer na-eweta ahụmịhe miri emi n'ijikọ data, nghọta na omume iji nweta echiche ndị na-azụ ahịa na-adịgide adịgide. Tupu MRP, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka ịzụ ahịa na ịre ahịa ma na-arụ ọrụ nchịkwa ahịa na Acxiom, Rigzone na ndị ọzọ.
Ịre ahịa dabere na Akaụntụ 3-D (ABM): Otu esi ewebata ahịa B2B gị na ndụ
Monday, October 25, 2021 Monday, October 25, 2021 Jennifer Golden
Ka anyị na-agbawanye ọrụ anyị na ndụ onwe anyị n'ịntanetị, mmekọrịta na njikọ B2B abanyela n'ụdị ngwakọ ọhụrụ. Ịre ahịa dabere na Akaụntụ (ABM) nwere ike inye aka ịnye ozi dị mkpa n'etiti ọnọdụ na ọnọdụ na-agbanwe agbanwe - mana ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dakọtara mgbagwoju anya n'ebe ọrụ ọhụrụ yana akụkụ teknụzụ ọhụrụ nke na-ejikọ data dị mma, nghọta amụma, na mmekọrịta oge. N'ịbụ onye ọrịa COVID-19 na-enyocha ya, ụlọ ọrụ gburugburu ụwa echegharịla nhazi ọrụ dịpụrụ adịpụ. Ihe dị ka ọkara nke ụlọ ọrụ